Taunggyi - The Cherry Land: မျှော်နေမိပါသည်
ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကို ပြန်ရောက်တိုင်း လူတိုင်းရင်မှာ နွေးထွေးမှု၊ အေးငြိမ်းမှု ဆိုတာလေးကို ခံစားမိကြမည်လို့ ထင်ပါသည်။ ထို့ထက်ပိုပြီး အရိပ်အာဝါသတွေထဲမှာ မိဘရဲ့မေတ္တာရိပ်က အအေးမြဆုံး ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်သလို ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကျွန်တော်ပြန်တိုင်း မိဘရဲ့မေတ္တာရိပ်ထက် ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်း ဦးစွာ နွေးထွေးမှုတွေနဲ့ ဆီးကြိုတာကတော့ ကျွန်တော့် မွေးရပ်မြေလေး ပါပဲ။
ခရီးမျိုးစုံ၊ ဒေသမျိုးစုံကို သွားရောက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် မြို့တစ်မြို့ဝင်တိုင်း၊ ဖြတ်သွားတိုင်း ကျွန်တော့်ရင်မှာ မှတ်မှတ်ရရလေး ထင်ကျန်ခဲ့တာဆိုလို့ မရှိခဲ့ပါ။ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်သည်။ ငါပဲ ဒေသစွဲ ကြီးတာလားလို့လေ။ ကလော တောင်တက်ကို ကျော်ပြီးကတည်းက အေးချမ်းမှုတွေနဲ့ စတင်တတ်တယ် ဆိုတာ အားလုံး သတိထားမိကြ မှာပါ။ အေးချမ်းမှုဆိုတာ ရှမ်းပြည်ရဲ့အမှတ်အသားလို့ပြောရမည်လား။
ဒီထက်ပို၍ ထိုင်းမှိုင်းမှု၊ ငိုက်မျဉ်းမှု နေရာမှာ လန်းဆန်းမှုတွေ နေရာယူလာ တတ်တာကိုကော သတိထားမိ ကြရဲ့လား? တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ... ဟိုင်းဝေးကားတွေ ၀င်တတ်တာ မနက်ပိုင်းမို့ အိပ်ရေးကလည်း ၀နေပြီကိုး ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ထောက်မပြနဲ့ပေါ့ ... ဟီးဟီး။
ဘယ်လိုပဲပြောပြော ရွှေညောင်လောက်က စတင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အငန်းမရ ကြည့်ရတာ အမော။ ဘာတွေ ပြောင်းလဲနေပြီလဲပေါ့။ အဝေးမှာဆို တောင်ချွန်းကြီးကို မြင်နေရပြီလေ။ မကြာခင် တောင်ကြီးမြို့ထဲကို ၀င်တော့မှာပါလား ဆိုတဲ့အတွေးက ရင်ခုန်သံကို မြန်စေတယ် ဆိုတာလည်း သတိထား ဖြစ်သည်။ ဘေးပတ်လည် သစ်ပင်တွေနဲ့ အုံမှိုင်းနေတဲ့ လမ်းလေးကိုဖြတ်ရင်း အေးချမ်းမှုနဲ့အတူ နွေးထွေးမှုတွေပါ ခံစားလာရတယ် ဆိုတာကော သတိထားမိရဲ့လား?
ဘယ်လောက် ဝေးလံတဲ့ ခရီးက ပြန်လာပါစေ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားမှု၊
ထိုခံစားမှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှ နွေးထွေးမှု၊ ထိုနွေးထွေးမှုလေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးရပ်မြေလေးက ယခုထက်တိုင် မပျက်မကွက် ပေးနေဆဲ။
ကျွန်တော်တို့ကိုပဲ သူကပေးနေတာလား.. ဟုတ်မည် မထင်ပါ.. လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့ သူတိုင်း တောင်ကြီးမြို့လေးကို နောက်ထပ် လာချင်နေသေးတာ ဘာလို့လဲ? ရှင်းပါသည်။ ကျွန်တော် ကတော့ ရှင်းတယ်။ ဟိဟိ။
ထိုကဲ့သို့ နွေးထွေးမှုတွေ ပေးနေသော တောင်ကြီးမြို့လေးကို ကျွန်တော် လွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော် မျှော်နေမိမှာပါ။ နွေးထွေးမှုတွေနဲ့အတူ ဆီးကြိုနေမယ့် မွေးရပ်မြေလေးကို ပြန်ရမယ့် အချိန်ကိုပေါ့...
ရေးသားသူ နေလင်း အချိန် 9:02:00 PM
ကိုနေလင်းရေ အခုPost က တောင်ကြီးချယ်ရီရဲ့ ၁၀၀ ပြည့် Post ဗျ။ အားပေးနေပါတယ်။ Post တွေ ဆက်ရေးဖို့လဲ တောင်းဆိုတယ်နော်။ Cheer!!!
Sunday, July 29, 2007 9:59:00 PM
ကိုနေလင်း ရေ အဒါကတော့အမှန်ဘဲ
ကျွန်တော် ကတောရွှေညောင်ကပါ တနေ့ တော့
Wednesday, July 23, 2008 10:59:00 AM
SAME TO U, FRIEND,
Friday, October 10, 2008 4:18:00 PM
I miss Tgi
Thursday, October 29, 2009 1:53:00 PM
I also really miss my hometown,tgi
Tuesday, December 08, 2015 7:53:00 AM
Monday, July 25, 2016 3:22:00 PM
Tuesday, August 02, 2016 7:35:00 AM
Tuesday, July 11, 2017 4:46:00 PM